“Angilona ikati” Ummeli waseMelika utshela ijaji | Scrolla Izindaba
“Angilona ikati” Ummeli waseMelika utshela ijaji
URod Ponton, ongummeli waseMelika, uthathe i-intanethi ngesibindi ngemuva kokuvaleleka kwividiyo yengqungquthela nge-filter yobuso bekati, okwamenza ikati ngesikhathi somhlangano nejaji.
Kule vidiyo yemizuzwana engama-49, uMnu Ponton uvela ekhoneni elingezansi kwesokudla ku-Zoom call. Ikhanda lakhe limbozwe ngoboya obumhlophe namehlo akhe amakhulu ekati azulazulayo ngenkathi ezama – futhi ehluleka – ukususa i-filter.
Kule ngqungquthela ujoyine nabameli ababili ababhekane nezimali kanye nejaji, uRoy Ferguson. Ijaji alibonakali ku-screen
Ekhoneni eliphambene ku-feline kaPonton kunesaziso esinzima esibhalwe ngokumnyama nokumhlophe esithi “Ukuqoshwa kwalokhu kuzwa noma ukusakaza bukhoma akuvunyelwe.”
Ngemuva kokuthula isikhashana, iJaji uFerguson ekugcineni uthi “Mnu. Ponton, ngikholwa ukuthi une-filter evuliwe ku-setting yamavidiyo, ungahle ufune -“
“Ahhh. Uyangizwa, Jaji?” “ikati” liyaphendula ngokwesaba.
UFerguson uyaphendula: “Ngiyakuzwa. Ngicabanga ukuthi yi-filter…”
“Iyona futhi angazi ukuthi ngizoyisusa kanjani,” kusho uPonton othe umsizi wakhe naye ubezama ukumsiza. Uthe uzimisele ngokuqhubeka nocingo.
“Ngilapha, ngyabona. Angilona ikati, ”kusho uPonton
Ngalesi sikhathi, omunye wabameli ofuna ukuhleka, uJerry L. Phillips, ubukeka ekulungele ukuqhuma insini, kodwa esikhundleni salokho wakwazi ukukhombisa ukumamatheka okunozwelo.
Omunye ummeli, uH. Gibbs Bauer, usaqhubeka nokuma ngemuva kwezingilazi ezimnyama.
Ngemuva kwalokho, uFerguson wasibona ngokusobala sonke lesi sigameko njengomzuzu wokufundisa, ebhala ku-twitter: “Uma ingane isebenzise ikhompyutha yakho, ngaphambi kokujoyina imihlangano yocingo, hlola izinketho zevidiyo ye-Zoom ukuze uqiniseke ukuthi ama-filter avaliwe.”
Wengeze wathi, “Wonke umuntu obambe iqhaza uziphathe ngesizotha – futhi ummeli ohlungiwe wakhombisa umusa omangalisayo. Ubuchwepheshe beqiniso nxazonke!”